Uphononongo olutsha lubonisa ukuFudukela emaphandleni ukuya ezidolophini kunokukhokelela ekutyebeni
Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Iindaba zocingo » Uphononongo olutsha lubonisa ukuFudukela emaphandleni ukuya ezidolophini kunokukhokelela ekutyebeni
Ukutyeba ngokugqithisileyo kunye nokutyeba zezona ngxaki ziphambili zempilo yoluntu kwinkulungwane yama-21, kwaye iinzame ezinkulu zokuqonda unobangela wofuzo nezinto zokusingqongileyo ziyaqhuba. Okubangel’ umdla kukuba, uphando lubonise ukuba abantu abafudukela kwiindawo ezisemaphandleni besiya kwimimandla yasezidolophini basengozini enkulu yokuba batyebe ngokugqithiseleyo okanye batyebe, mhlawumbi ngenxa yokwamkelwa kokutya okungekho mpilweni kunye neendlela zokuphila.
Oku kuchaphazela abasemagunyeni kwezempilo yoluntu e-China, ilizwe elibone abantu abaninzi befudukela ezilalini besiya ezidolophini njengoko abasebenzi baseTshayina befuna amathuba okuphucula ubomi babo. Nangona kunjalo, imibutho phakathi kokuhlala ezidolophini kunye nokutyeba kakhulu kunye nokukhuluphala akuzange kufundwe kakuhle eTshayina.
Ukulungisa lo msantsa, uNjingalwazi uGuang-Liang Shan ovela ePeking Union Medical College, eTshayina, kunye noogxa bakhe bafuna ukuqonda ifuthe lokufudukela ezilalini ukuya ezidolophini kubunzima obugqithisileyo kunye nokutyeba kakhulu kubantu baseYi, iqela lohlanga oluncinci olusuka ezintabeni ezikude. iindawo kumzantsi-ntshona China. Bacinga ukuba abafuduki base-Yi basemaphandleni ukuya ezidolophini banokuba sengozini yokutyeba ngokugqithiseleyo okanye ukutyeba, kunye nobudala bokufuduka kunye nobude bexesha lokufuduka (oko kukuthi, ixesha elichithwe behlala kwindawo yasezidolophini) ukuchaphazela ubungakanani bengozi enjalo. Ukuvavanya le ngcamango, abaphandi bahlalutya idatha evela kwi-1,162 Yi yasemaphandleni ukuya edolophini kunye namafama angama-1,894 e-Yi avela kwi-Liangshan Yi Autonomous Prefecture kwiphondo laseSichuan esebenzisa imodeli yezibalo eziyinkimbinkimbi. Iziphumo zohlalutyo lwabo zivela kwiphepha elipapashwe kwi-Chinese Medical Journal nge-20 ka-Agasti, 2020.
Xa kuthelekiswa namafama e-Yi angafudukiyo, abafuduki babenemilinganiselo ephezulu yobunzima bomzimba kwaye babenamathuba angama-2.13 okuba batyebe kakhulu okanye batyebe. Kubantu abafudukayo ababeneminyaka engama-20 okanye abancinci xa befika, umngcipheko wokuba nomzimba ogqithiseleyo okanye ogqithiseleyo awuzange unyuke kunye nexesha elichithwe kwindawo yasezidolophini. Ngokwahlukileyo koko, kubafuduki ababeneminyaka engaphezu kwama-20 ubudala ngexesha lokufuduka, ukuhlala ixesha elide elingaphezu kweminyaka engama-30 kwindawo yasezidolophini, kubonise imingcipheko eyongeziweyo yokuba nomzimba otyebileyo okanye otyebileyo.
UProf. Shan ucacisa ngolu hlobo: “Abaphambukeli baseYi abanexesha elide lokuhlala ezidolophini babefunde bhetele kwaye benemivuzo ephezulu yobuqu, nto leyo ethetha ukuba babengafane basebenze kwimisebenzi efuna umsebenzi omninzi osebenza ngokwasemzimbeni kwaye babenokufikelela kwiindawo ezityebileyo nezityebileyo. ukutya okuxineneyo kwamandla. Kwelinye icala, ukufuduka kwasebuncinaneni kusenokuthetha ukufikelela bhetele kwimfundo, yaye imfundo ebhetele inokukhokelela ekwandeni kokuqonda ngendlela yokuphila ubomi obusempilweni.”
Iziphumo zigxininisa imfuneko yeenkqubo zokwazisa abantu abasuka kwamanye amazwe abasuka emaphandleni ukuya ezidolophini ngokwamkela indlela yokuphila esempilweni kwimimandla yasezidolophini ukuze kuncitshiswe iingozi zempilo.
Oku ngakumbi: Sichuan
Uphononongo olutsha lufumana ukusweleka koMhlaza wamabele kwihlabathi lonke kwanda
Ukuqaliswa kweYurophu ngoku kwekrimu kwi-plaque psoriasis
IMarike yeNkuku yoDiagnostics Iyanda nge-10.5% CAGR...
IMadrid, uMamkeli ozingcayo we-MCE eMzantsi Yurophu ngo-2022
I-Microencapsulated ye-Omega-3 Powders ye-Powder yeMarike Isigqubuthelo...
Ungayithumela njani imali eRashiya?
IChianti Classico okanye iChianti: Ngaba ibalulekile ngokwenene?
Ubungakanani beMarike ye-Hydrogen Electrolyzers 2022: Ikamva...
Iziphumo ezilungileyo kwiiMpawu kunye neeMpawu ze-Eosinophilic...
Fluorescent Pigment Market Outlook 2017 Amaxabiso...
I-iPod ende: I-Apple itsala iplagi kwisixhobo sayo somfanekiso
Kunye. Ngcono. NONE
IMarike yeYogathi ePhezulu yeProtheyini ka-2022 Abadlali abaPhambili, iSWOT...
IVista Globa Holdings ifumana i-AIR HAMBURG kwisivumelwano esitsha
Finnair: Iinqwelomoya zaseYurophu naseMelika, indlela entsha yaseMumbai...